financial report - Arthasansar
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको पहिलो त्रैमासको वित्तिय विवरण प्रकाशित, वित्तिय अवस्था कस्तो?
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लिमिटेडले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तिय...
लाभांश पारित गर्न डिप्रोक्स लघुवित्तले डाक्यो साधारणसभा, बुक क्लोज कहिले ?
डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले २० औँ बार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । ...
आइतबार, ०३ असोज २०७८, ०६ : ५०
नेपालका अधिकांश पब्लिक कम्पनीहरुले अघिल्लो आर्थिक बर्षको वित्तीय विवरणहरु सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा गत आर्थिक बर्षमा नेपालका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुनाफामा बृद्धि भएको छ...
सोमबार, ०७ भदौ २०७८, १३ : २७
नेशनल हाइड्रोले तल्लाे इन्द्रावतीकाे लाइसेन्स पाएपछि २० प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने
नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार कम्पनीको विद्युत आयोजनाको बाँउमा बाढीले क्षति पुर्याएकाले केही दिन विद्युत उत्पादन नहुँदा...
आइतबार, ०६ भदौ २०७८, ०७ : ५२
हालै आईपिओ जारी गरेको युनियन लाइफको नाफा २१.४८ प्रतिशतले घट्यो, ईपिएस कति ?
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको उक्त विवरण अनुसार सो अवधिसम्म कम्पनीको नाफामा गिरावट आएको छ ।
मंगलबार, ०१ भदौ २०७८, ०८ : २९
कोभिडको मारमा सोल्टी होटलः १८.६० करोड नोक्सानी हुँदा प्रतिसेयर आम्दानी ऋणात्मक
सोल्टी होटल लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथोे त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार कम्पनीको नाफामा व्यापक गिरावट देखिएको छ । ...
मंगलबार, ०१ भदौ २०७८, ०७ : १४
वित्तिय विवरणः नबिल, ग्लोबल आईएमई र एनआइसी एसिया बैंक कुन सूचकमा कुन बलियो ?
अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले धमाधम गत आर्थिक बर्ष २०७७/२०७८ को अपरिष्कृत वित्तिय विवरणहरु प्रकाशन गरीरहेका छन् । ...
सोमबार, ३२ साउन २०७८, १३ : २३
अपि पावरको प्रतिसेयर आम्दानी ५ रुपैयाँमा खुम्चियो !
अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । ...
सोमबार, ३२ साउन २०७८, १० : २३
नेपाल एसबिआई बैंकको खुद मुनाफा ३७.७४ प्रतिशतले घट्दा, वितरणयोग्य नाफामा पनि भारी गिरावट
नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार बैंकको खुद मुनाफामा गिरावट आएको छ । ...
सोमबार, ३२ साउन २०७८, ०८ : ४८
ग्लोबल आईएमइ बैंकको नाफा ४१.८७ प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
ग्लोबल आईएमइ बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार बैंकको खुद मुनाफामा बृद्धि आएको छ । ...
सोमबार, ३२ साउन २०७८, ०७ : ५१
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको नाफामा सामान्य बृद्धि, इपिएस भने घट्यो
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको उक्त विवरण अनुसार सो अवधिसम्म कम्पनीको नाफामा बृद्धि आएको छ । ...
सोमबार, ३२ साउन २०७८, ०७ : ०६
नेको इन्स्योरेन्सको अधिकांस सूचकमा चमक, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको उक्त विवरण अनुसार सो अवधिसम्म कम्पनीको नाफामा बृद्धि आएको छ । ...
सोमबार, ३२ साउन २०७८, ०६ : ५४
शिवम् सिमेन्टको नाफा १.३९ अर्ब, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।उक्त विवरण अनुसार कम्पनीको खुद मुनाफा बृद्धि भएको छ । ...
सोमबार, ३२ साउन २०७८, ०६ : ३०
सेञ्चुरी बैंकको नाफा ६.७७ प्रतिशतले घट्यो, वितरणयोग्य मुनाफा भने ४८ प्रतिशले बढ्यो
सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार बैंकको खुद मुनाफामा गिरावट आएको छ । ...
सोमबार, ३२ साउन २०७८, ०५ : ५५
नबिल बैंककोे नाफामा छलाङ, खुद नाफा ४.५० अर्ब, लाभांश क्षमता कति ?
नबिल बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार बैंकको खुद मुनाफामा बृद्धि आएको छ । ...
सोमबार, ३२ साउन २०७८, ०५ : १८
सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंकको नाफामा छलाङ, कति दिनसक्छ लाभांश ?
सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार बैंकको खुद मुनाफामा बृद्धि आएको छ । ...
आइतबार, ३१ साउन २०७८, १० : २६
एनसीसी बैंकको खुद नाफा १.२७ अर्ब, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
एनसीसी बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार बैंकको खुद मुनाफामा बृद्धि आएको छ । ...
आइतबार, ३१ साउन २०७८, ०८ : ५५
कोभिडले पनि रोकेन युनिलिभर नेपालको नाफा, प्रतिसेयर आम्दानी ९०० रुपैयाँ बढि
युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार कम्पनीको खुद मुनाफा बृद्धि भएको छ । ...
आइतबार, ३१ साउन २०७८, ०८ : २४
हालै आईपिओ जारी गरेको सानिमा लाइफको बीमा शुल्क १३३ प्रतिशतले बढ्यो, ईपिएस कति ?
सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको उक्त विवरण अनुसार सो अवधिसम्म कम्पनीको नाफामा वृद्धि भएको छ ।
आइतबार, ३१ साउन २०७८, ०७ : ५३
आईपिओ बिक्रि खुल्ला गरेको मानुषी लघुवित्तको नाफा २३८५ प्रतिशतले बढ्यो, अन्य अवस्था कस्तो ?
मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरष्किृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार चौथो त्रैमाससम्म संस्थाको नाफामा बृद्धि भएको देखिन्छ । ...
आइतबार, ३१ साउन २०७८, ०७ : २८
मुक्तिनाथ बन्यो सवैभन्दा बढि नाफा कमाउने विकास बैंक, लाभांश क्षमता कति ?
मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार बैंकको खुद मुनाफामा बृद्धि आएको छ । ...
आइतबार, ३१ साउन २०७८, ०६ : ३४
शिखर इन्स्योरेन्सको मुनाफामा सामान्य बृद्धि, १५ रुपैयाँले घट्यो प्रतिसेयर आम्दानी
शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको उक्त विवरण अनुसार सो अवधिसम्म कम्पनीको नाफामा बृद्धि आएको छ । ...
आइतबार, ३१ साउन २०७८, ०६ : १५
सिद्धार्थ बैंकको नाफामा बृद्धि, वितरण योग्य मुनाफा कति ?
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार बैंकको खुद मुनाफामा बृद्धि आएको छ । ...
आइतबार, ३१ साउन २०७८, ०५ : ५७
माछापुच्छ्रे बैंकको खुद नाफा २८.८९ प्रतिशतले बढ्यो, इपिएस कति ?
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।उक्त विवरण अनुसार बैंकको खुद मुनाफामा बृद्धि आएको छ । ...
आइतबार, ३१ साउन २०७८, ०५ : ४२
सानिमा बैंकको खुद नाफा २.२७ अर्ब, लाभांस क्षमता कति ?
सानिमा बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार बैंकको खुद मुनाफामा बृद्धि आएको छ । ...
आइतबार, ३१ साउन २०७८, ०५ : २७
ज्योति विकास बैंकको खुद नाफा ७४.१६ करोड, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार बैंकको खुद मुनाफामा बृद्धि आएको छ । ...
शनिबार, ३० साउन २०७८, १७ : ५६
एनएमबि बैंकको नाफा ५९ प्रतिशतले बढ्यो, वितरणयोग्य मुनाफा कति ?
एनएमबि बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार बैंकको खुद मुनाफामा बृद्धि आएको छ । ...
शनिबार, ३० साउन २०७८, १७ : ०२
अजोड इन्स्योरेन्सको नाफा ४९ प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको उक्त विवरण अनुसार सो अवधिसम्म कम्पनीको नाफामा बृद्धि आएको छ । ...
शुक्रबार, २९ साउन २०७८, १५ : ३८
गुडविल फाइनान्सको नाफा ६९.८६ प्रतिशतले बढ्यो, रिजर्भमा १६२.९२ प्रतिशतको बढोत्तरी !
गुडविल फाइनान्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।उक्त विवरण अनुसार फाइनान्सको खुद नाफामा बृद्धि भएको छ । ...
शुक्रबार, २९ साउन २०७८, ०९ : ५०
नेपाल बैंकको वितरण योग्य मुनाफा ५८ प्रतिशतले बढ्यो, इपिएस कति ?
नेपाल बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार बैंकको खुद मुनाफा बृद्धि भएको छ । ...
शुक्रबार, २९ साउन २०७८, ०९ : ०४
हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको बिमा शुल्क सहित नाफामा गिरावट, इपिएस कति ?
हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको उक्त विवरण अनुसार सो अवधिसम्म कम्पनीको नाफामा गिरावट आएको छ...
शुक्रबार, २९ साउन २०७८, ०८ : २७
बुटवल पावरको नाफा ३१ प्रतिशतले घट्यो, अन्य अवस्था कस्तो ?
बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । ...
शुक्रबार, २९ साउन २०७८, ०७ : ५४
नेपाल लाइफको नाफामा सामान्य बृद्धि, जिवन विमा कोषमा १.१२ खर्ब जम्मा
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चाैथाे त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको उक्त विवरण अनुसार सो अवधिसम्म कम्पनीको नाफामा वृद्धि भएको छ...
शुक्रबार, २९ साउन २०७८, ०७ : ४१
हिमालयन डिष्टिलरीको नाफा १२२.९० प्रतिशतले बढ्यो, लाभांश क्षमतामा झनै बलियो
अघिल्लो आर्थिक बर्षमा १०० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हिमालयन डिष्टिलरी कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार कम्पनीको खुद मुनाफा...
शुक्रबार, २९ साउन २०७८, ०७ : २०
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको वितरण योग्य मुनाफा २०५ प्रतिशतले बढ्यो
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार बैंकको खुद मुनाफा बृद्धि भएको छ । ...
शुक्रबार, २९ साउन २०७८, ०७ : ०२
युनाईटेड इन्स्योरेन्सको नाफा ३३० प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको उक्त विवरण अनुसार सो अवधिसम्म कम्पनीको नाफामा बृद्धि भएको छ ।
शुक्रबार, २९ साउन २०७८, ०६ : ४३
नेशनल माइक्रोफाइनान्सको नाफामा छलाङ, ४७ रुपैयाँले बढ्यो प्रतिसेयर आम्दानी !
नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरष्किृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार चौथो त्रैमाससम्म संस्थाको नाफा उल्लेख्य बृद्धि भएको देखिन्छ । ...
शुक्रबार, २९ साउन २०७८, ०६ : २५
लक्ष्मी बैंकको नाफा १.५४ अर्ब, वितरण योग्य मुनाफा १० प्रतिशतले घट्यो
लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार बैंकको खुद मुनाफामा सामान्य बृद्धि आएको छ । ...
शुक्रबार, २९ साउन २०७८, ०६ : ०८
एभरेष्ट बैंकको नाफा २७.३४ प्रतिशतले घट्यो, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार बैंकको खुद मुनाफामा गिरावट आएको छ । ...
शुक्रबार, २९ साउन २०७८, ०५ : ४७
हिमालयन बैंकको ब्याज आम्दानी घट्दा पनि मुनाफा बढ्यो, वितरण योग्य नाफा २.१६ अर्ब !
हिमालयन बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार बैंकको खुद मुनाफा बृद्धि भएको छ । ...
शुक्रबार, २९ साउन २०७८, ०५ : ०७
मेगा बैंकको नाफा २ अर्ब नाघ्योः अधिकांश सूचकमा चमक, वितरण योग्य मूनाफा कति ?
मेगा बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार बैंकको खुद मुनाफा बृद्धि भएको छ । ...
शुक्रबार, २९ साउन २०७८, ०४ : ४२
निरन्तर सेयर मूल्य बढिरहेको ङादी ग्रुपको नाफामा उछाल, इपिएस कति ?
ङादी ग्रुप पापर लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । ...
विहीबार, २८ साउन २०७८, ०७ : ३५
बिद्युत आम्दानी बढेसँगै नोक्सानी घटाउदै घलेम्दी हाइड्रो,आम्दानी २४७.७९ प्रतिशतले बढ्यो
घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । ...
विहीबार, २८ साउन २०७८, ०७ : ०६
रैराङ हाइड्रोपावरको खुद नाफामा छलाङ, ५०० प्रतिशतले बढ्यो रिजर्भको आकार !
रैराङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । ...
विहीबार, २८ साउन २०७८, ०६ : ४४
गरिमा विकास बैंकको नाफा ८२ करोड नाघ्यो, वितरण योग्य मुनाफा कति ?
गरिमा विकास बैंकले गत आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को अपरिष्कृत वित्तिय विवरण प्रकाशित गरेको छ । प्रकाशित वित्तिय विवरण अनुसार गत आर्थिक बर्षको अन्तिमसम्ममा कम्पनीको मुनाफामा ब्यापक बृद्धि भएको देखिन्छ ...
विहीबार, २८ साउन २०७८, ०६ : २३
सुर्य लाइफको नाफा २३.०१ प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
सुर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको उक्त विवरण अनुसार सो अवधिसम्म कम्पनीको नाफामा बृद्धि भएको छ...
विहीबार, २८ साउन २०७८, ०५ : ४४
कुमारी बैंकको नाफामा उछाल, वितरण योग्य मुनाफा ५३ प्रतिशतले बढ्यो
कुमारी बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार बैंकको खुद मुनाफा बृद्धि भएको छ । ...
विहीबार, २८ साउन २०७८, ०५ : ३०
आईपिओ निष्काशनको तयारीमा रहेको रिलायबल लाइफको वित्तिय अवस्था कस्तो ?
रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको उक्त विवरण अनुसार सो अवधिसम्म कम्पनीको नाफामा सामान्य बृद्धि...
बुधबार, २७ साउन २०७८, ०६ : ४२
हिमालयन उर्जा विकास कम्पनीः इपिएस ४ पैसा, पिई रेसियो ९३८८.९४ !
हिमालयन उर्जा विकास कम्पनी कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । ...
बुधबार, २७ साउन २०७८, ०६ : १८